Puntland oo khalkhalgalin amni ku tilmaantay warbixintii Gaad iyo Gaas oo isna difaacay dhab ahaansha xogtii uu soo bandhigay. (Dhegayso) – Radio Daljir
Nofeembar 6, 2012 11:48 b 0
Garowe, Nov 06 – Maamulka Puntland ayaa xaalad-abuurid iyo amni khalkhalin ku tilmaamay warbixin uu maanta Galkacyo ka soo saaray R/wasaarihii hore ee dawladda federaalka Prof. Cabdiweli Maxamed Cali ‘Gaas’, taasoo uu kaga warramay socodaalkiisii deegaannada Puntland iyo saadaalaha muuqda ee xaaladda gobolka.
Wasiirka warfaafinta maamulka Puntland Mudane Caydiid, ayaa shir jaraa’id oo uu galabtay ku qabtay magaalo madaxda Puntland ee Garowe ku caaliqay warbixinta Gaas iyo war-saxaafadeedkii ay ku soo baxday, isagoo ku sheegay mid xaqiiqda ka durugsan xaaladda Puntland qasi karta.
Wasiirka oo dheeganayey qodobo warbixintaas ku jiray oo ka hadlayey heerka uu haatan joogo amniga Puntland, dhaqaalaha iyo hormarka kaabayaasha asaasiga u ah nolosha bulshada, ayaa ku celceliyey halbawlayaasha wiiqmay iyo horukac la’aanta hormareed ee muuqta in ay hoggar-daamo Puntland uga timid dawladdii federaalka ee Gaas uu R/wasaaraha ka ahaa, uuna isagu leeyahay mas’uuliyadda wax ba’soomay.
Md. Caydiid, waxaa uu nuxurka guud ee ay warbixinta xambaarsanahayd ku tilmaamay in ay ahayd, mid astaan u ah arrimaha lagu yaqaanno madaxda siyaasadda ku fashilmay, isagoo ku eedeeyey Gaas, in uu maleegay qorshayaal lagu hor is taagayey mashaariic hormarineed oo la doonayey in laga hirgaliyo Puntland xilligii uu R/wasaaraha ahaa.
Dhinaca kale Prof. C/weli Gaas, oo isna kaga jawaabay eedaymahaasi Puntland waraysi uu siiyey laanta Afka Soomaaliga ee BBC-da, ayaa wax laga xumaado oo runta ka durugsan ku tilmaamay hadalka wasiirka warfaafinta, isagoo dhinaca kalena difaacay qodobadii uu huwanaa warsaxaafadeedkiisii maanta ee xaaladda Puntland.
Mr. Gaas, waxaa uu sheegay warbixintiisu in ay ahayd mid ku salaysan xaaladda dhabta ah ee ka jirta deegaannada Puntland, kana turjumaysa dareenka shacabka iyo doonistooda rabitaan ee hormar Puntland ka hana-qaada, taasoo uu sheegay dhanka san in ay wax ka eegaysay.
Gaas, waxaa uu iska fogeeyey hab-dhigaalkiisa warbixineed in uu ahaa mid la iska cabbiray, isagoo taas baddalkeeda carrabka ku dhajiyey xogtiisu in ay ka koobnayd indhihiisa wuxuu ku arkay, aragtida bulshadii kala duwanayd ee uu la kulmay iyo ogaalkiisa arrimaha siyaasadeed iyo kuwa bulsho ee Puntland.
Warbixinta Gaas ee ka caraysiisay maamulka Puntland, ayaa ahayd mid ku soo baxday war-saxaafadeed uu maanta Galkacyo ku qabtay, kaasoo uu kaga warramayey socdaalkiisii deegaannada Puntland, daboolkana ka rofaysay xaaladaha dhaqan-dhaqaale, kuwa ammaan iyo siyaasadeed, iyo arrimaha lagu muransan yahay ee xilliga xil-hayneed ee hay?adda dawladda.
Prof. Gaas, oo war-saxaafadeed ku diiday xil-kororsiga Puntland, Issimadana baaq u jeediyey.(Dhegayso)